Shiinaha Naqshadeynta Naqshadeynta Elektarooniga ah iyo Shirkad | Meesha
Naqshadeynta guryaha elektarooniga ah ayaa ah qaabeynta muuqaalka iyo qaab dhismeedka gudaha ee alaabada elektarooniga ah. Waxaa ku jira naqshad guud iyo naqshad faahfaahsan oo qaybo ah.
Xarkaha balaastigga iyo qeybaha birta ayaa qeyb muhiim ah ka ah alaabta elektaroonigga ah. Waxay bixiyaan hoy, taageero, ilaalin iyo hagaajin loogu talagalay badeecada oo dhan, waxayna ku xirmaan oo isku daraan dhammaan qaybaha guud ahaan.
Alaabooyinka elektaroonigga ah waa alaabooyin la xiriira oo ku saleysan tamarta korantada, inta badanna ay ku jiraan saacadaha, taleefannada casriga ah, taleefannada, qalabka TV-yada, VCD, SVCD, DVD, VCD, VCD, VCD, VCD, VCD, kaamirada, raadiyaha, duubista, isku-darka isku-darka, CD, kombiyuutarka , ciyaaryahanka ciyaarta, alaabada isgaarsiinta moobilka, iwm
Fayadhowrka fayadhawrka caqliga badan
Ku hadla dijital
Qalabka sanduuqa TV-ga
Qalabka elektaroonigga ah ee caafimaadka
Muraayada gadaal baabuurka
Naqshadeynta guryaha iyo qaabdhismeedka alaabta elektiroonigga ah waxay ku saleysan tahay muuqaalka iyo baahiyaha shaqo ee alaabooyinka. Naqshadeynta sheyga elektiroonigga guud ahaan wuxuu maraa heerarka soo socda:
-Bahaminta macluumaadka dalabka suuqyada;
falanqaynta farsamada xirfadeed (falanqaynta suurtagalnimada); rimidda wax soo saarka iyo qorshaha hordhaca -Deero muuqaalka muuqaalka badeecada;
shaashadda iyo go'aaminta qorshaha muuqaalka-Qaabeynta 3D-soo-saarka; qaybo naqshad hordhac ah; naqshadeynta qaybaha; naqshadeynta booska kulanka - Naqshadeynta faahfaahinta qaybaha;
xaqiijinta wax soo saarka guddiga gacanta;
-Waa in naqshadeynta naqshadeynta loo dhiibaa soo saaraha caaryada -Dhaqeynta naqshadeynta:
nashqada kor ku xusan ayaa la soo saari doonaa ka dib marka laga gudbo dib u eegista. Ka dib dhammeystirka nooca, tijaabooyinka la xiriira waa in lagu sameeyaa iyadoo la raacayo shuruudaha xeerarka badbaadada, oo ay ku jiraan: waxqabadka, isku imaatinka, qaab dhismeedka, buuqa, hoos u dhaca, iwm.
Dhis qaabka 3D
Guriyeynta alaabta elektarooniga ah guud ahaan waxaa ku jira qaybaha soo socda:
Kiisaska sare iyo hoose, qaybaha taageerada gudaha, furayaasha, shaashadda muuqaalka, saqafka batteriga, isdhexgalka, iwm.Sidaa darteed, naqshadeynta qolofka elektaroonigga ah waxaa ka mid ah qaabeynta qaybaha soo socda:
Naqshadeynta Shell -Key design
Naqshadaynta qaab dhismeedka
Naqshadaynta qaab-dhismeedka biyuhu
Naqshadeynta muraayadaha muraayadaha indhaha
-LLCD naqshadaynta qalabka
Naqshadeynta naqshadeynta xaglaha
Waxaa jira seddex qaab oo loo soo bandhigo macluumaadka badeecada si loo qaabeeyo:
J: Marka loo eego baahida suuqa, injineerku wuxuu rumeysanyahay qaabka guud (ODM) ee sheyga. Waxaa sidoo kale dooran kara macaamiisha ama si madax banaan loo horumariyey.
B: Macaamiilku waxay bixiyaan macluumaadka naqshadeynta, sida faylasha IGS (inta badan) ama sawirrada (OEM).
J: Waa la beddeli karaa iyadoo lagu saleynayo qaabka sheyga ee jira; waxaa dooran kara macaamiisha ama si madax banaan ayaa loo horumarin karaa.
Injineerada ku hawlan naqshadeynta wax soo saarka waa inay lahaadaan khibrada iyo macluumaadka soo socda
1. Aqoonta dulqaadka cabirka iyo ku habboonaanta qaybaha
2. Habka wax soo saarka iyo qiimaha qaybaha balaastigga iyo qalabka qalabka
3. Shuruudaha shaqada iyo shuruudaha muuqaalka alaabada
4. Aqoonta dhismaha ee alaabada la midka ah
5. Xiriirka cabbir ee qaybaha elektarooniga ah
6. Heerarka lagu kalsoonaan karo in la buuxiyo
7. Si xirfad leh u adeegso softiweerka naqshadeynta qaabeynta iyo falanqaynta alaabooyinka
Mestech waxay siisaa OEM nashqadeynta alaabada elektarooniga ah, furitaanka caaryada iyo adeegyada isku imaatinka wax soo saarka. Haddii aad leedahay dalab noocan ah, fadlan nala soo xiriir, waxaan kuugu adeegi doonnaa si kal iyo laab ah.
Hore: Shaabad bir ah
Xiga: Naqshadaynta qalabka guriga
Mashiinka la isku duro